Ọ bụ oge ngosi maka 'Beetlejuice' Starbucks Glow-in-the-Dark Tumbler-iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Ọ bụ oge ngosi maka 'Beetlejuice' Starbucks Glow-in-the-Dark Tumbler
Ọ bụ oge ngosi maka 'Beetlejuice' Starbucks Glow-in-the-Dark Tumbler
The tumbler na kasị
by Trey Hilburn III August 8, 2021 40,229 echiche
Mmụọ nke kacha nwee ikike banye n'ime ime mmụọ sitere na Starbucks. Ka anyị na -arụsi ọrụ ike na -enyocha omimi Etsy na -enweghị njedebe, anyị chọpụtara ọmarịcha obe maka Beetlejuce na enweghị iwu Starbucks
Epoxy a dị egwu na vinyl tumbler jisiri ike jikọta anya nke imebe Starbucks wee jiri Beetlejuice dochie akara ngosi ahụ. Onye na -afụ ụfụ na -abịa n'ụdị okirikiri ojii na ọcha dị ka uwe nke ama ama. Iko ahụ na-ejikwa slime na-enwu enwu nke gbara ọchịchịrị mechie anya ihe niile.
Etsy artist MulberryTribe na -enye nkọwa nke ihe dị na ibe a.
“Ugbu a na -atụgharị ebe m na -azụta tumblers m ka ị wee hụ ihe dị iche na ndepụta m! Mpempe akwụkwọ nha m bụ ihe tumblers ga -adị ugbu a. Ha bụ mma kacha mma. Ha nwere oghere mkpuchi na -emeghe ma mechie, akpụkpọ anụ na ụmụaka 12 oz na -abịa na ahịhịa rọba siri ike!
A na -ekpuchi Tumblers na epoxy maka ndụ ogologo oge. Biko dee n'ime igbe “ndetu nye onye na -ere ere” na ndenye ọpụpụ na aha (s) ịchọrọ na iko gị (ọ bụrụ na achọrọ)
Biko hapụ opekata mpe izu abụọ, a na -ekpuchi tumblers a na epoxy FDA kwadoro.
Ọ bụrụ na ị nwere arịrịọ omenala ịchọrọ ka eme ma ọ bụ ajụjụ ọ bụla, biko zitere m ozi ma ọ bụ mepụta ndepụta omenala! ”
I nwere ike ịgafere Ebe a iji tụọ nke gị.
Kedu ihe ị chere maka Starbucks sitere n'ike mmụọ nsọ Beetlejuce tumbler? Mee ka anyị mara na ngalaba nkọwa.